ယခုရက်ပိုင်း ဖျားနာကုဆေးခန်းတွေ ကနေ အနံ့ပျောက်လူနာတွေ ကို ပြန်လွှတ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း ဆရာဝန် ကိုယ်တိုင် ရှင်းပြီ – Zartiman
ငါတို့ ကို ပြောရင် ငါတို့ လုပ်ပေးမှာပေါ့… ဆိုတာမျိုး ပြောခဲ့ရင်…. အဲ့အသံ တွေ စထွက်လာတုန်းက… ဘာလို့ နားထဲ မဝင်သလဲဆိုတာ.. အသံလာရာ…လမ်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်…ထင်ပါတယ်…. အားလုံး ပူးပေါင်း လုပ်မှ…. အဆင်ပြေမယ့်အချိန်ပါ…. Fever Clinic က ဆရာဝန်တွေကို… ပြစ်တင်ပြောဆိုတာ…. မဖြစ်သင့်ပါ… လက်ရှိမှာ….အရှေ့အရမ်းရောက်နေတဲ့…. ကာကင်းတွေပါ…. သူတို့ဆီက အသံတွေ ကြောင့်သာ… အပေါ်က သိပြီး.. Guide Line တွေ…ပြင်လာတာပါ…။လေးစား အပ်ပါသော….. အမတ်မင်းများ ခမျာ…. Fever Clinic မှာ အနံ့ ပျောက်လူနာတွေ ပြန်လွှတ်နေရတယ် ဆိုတာ တစ်ကယ်ပါ…. အမတ်မင်း တို့ မသိကြသေးလို့ပါ…. ။
ဒီတိုင်း လူနာကို သေချာရှင်းပြ ပြီး… ပြန်လွှတ်နေတဲ့…..ဖျားနာကုဆေးခန်း တွေ ရှိပါတယ်…. အနံ့ပျောက်ရင် အိမ်ပြန်……..အိမ်မှာနေ… Mask တပ်ထား… နောက်ရက် လူနာတင်ကား နဲ့ လာခေါ်… Swab ယူပေး… အဲ့လို လုပ်နေရတာ ကြာပါပြီ ခမျာ….. ဘယ်တုန်းကတည်း ကလဲ ဆိုရင်….. ဆေးရုံမှာ….လူနာတွေ ပြည့်ကုန်ကတည်းက ပါ… Q centre တွေ…. နဲ့ ဆေးရုံ အသစ်တွေ မဖွင့်ခင် စပ်ကြားမှာပါ… အင်း စိန်မှာ Swab ယူ ဖို့…..ရက်ချိန်းတွေ ဘယ်ရက်အထိ ပြည့်ကုန်ပြီဆိုတဲ့ နေ့ရက်တွေကို သတိရမယ် ထင်ပါတယ်…. အဲ့အချိန်က စပါတယ် ….အဲ့ နည်းဗျူဟာကို အပေါ်က မကြိုက်ပါဘူး…. ဒါပေမယ့် Q centre တွေ ဆေးရုံ တွေ မှာ… နေရာ မဆန့်တဲ့အတွက်…။
​မြေ ပြင် က အဆင်ပြေသလို လုပ်နေကြတာကို… မသိချင်ယောင်ဆောင်ပေးထားကြပါတယ်…. .အဲ့နောက်ပိုင်း Q centre တွေ Guideline တွေ….ပြင်ပါတယ်. ဆေးရုံ တွေ ချဲ့ပါတယ်… နည်းနည်း ပြေလည် သွားပါတယ်…. ဒါပေမယ့် အနံ့ပျောက်လူနာတွေ တစ်အားများလာပြီး.. NHL ရဲ့ စစ်နှုန်းကို ကျော်လွန်လာတဲ့အခါ.. နောက်တစ်ခါ ဒီအတိုင်းပြန်လည်ပါတယ်..အဲ့အထိ အမတ်မင်းများ…သိပ်မသိကြသေးပါ… အုပ်ချုပ်ရေးမှာ အပေါ်ပိုင်း လောက်ကသာ… သိပါတယ်…. အခု ပြောတဲ့ အောက်က Case လောက်သာ… အမတ်မင်းတို့ Level နဲ့ သိကြမှာပါ…. အမတ်မင်းများ သိအောင်… ပြသနာ အနည်းငယ် ရှိတဲ့ ကိစ္စလေးတွေ… ပြောပြပါမယ်…။
စစခြင်း ဖြစ်တာ….မြောက်ဥက္ကလာပါ…. မြောက်ဥက္ကလာ Fever Clinicက အနံ့ပျောက်လူနာ ပြန်လွှတ်တာကို…. အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက သိသွားပါတယ်… သိတော့ Complaint တက်ပါတယ်… အဲ့ ချိန်က ရိုးမ ဆေးရုံ စRun ဖို့ လုပ်နေချိန်ထင်ပါတယ်…… ဖြစ်စဉ်မှာ …အဆင့်ဆင့် ခေါင်းမခံ ပဲ… မရှင်းပြပဲ… ပြန်လွှတ်တဲ့ ဆရာဝန် ခေါင်းခံ လိုက်ရပါတယ်..။ရလဒ်က မြောက်ဥက္ကလာ Fever clinic ပိတ်ပါတယ်.. အဲ့တာရဲ့ အကျိုးဆက်က… မြောက်ဥက္ကလာ ဆေးရုံ ကို ဖျားနာကု လူနာတွေ.. အများကြီး တိုက်ရိုက် ဝင်ပါတယ်… အရှေ့က ကာထားတဲ့ Fever Clinic တံတိုင်းမရှိလို့ပါ… အဲ့လို ပြန်လွှတ် နေရပါတယ် ဆိုတာကို…. အလယ် Level က သိတာ… ။
ဆေးခန်း နှစ်ခု မြောက်….မှပါ…. အဲ့တော့မှ မျက်ကလဲဆန်ပြာ ဖြစ်ကုန်ကြတာပါ…. အဲ့အရင် ပြောခဲ့…ကြပါတယ်… သိပ်မ လှုပ်ခဲ့ ကြပါ… အလုပ်ရှုပ်နေတာလဲ ပါပါလိမ့်မယ်….. ခုကြတော့မှ အသံထွက်တဲ့ ဆရာဝန်တွေကို… လိုက် ဖိပြောနေကြတာ… သဘာဝ မကျပါ….။ အားလုံးကောင်းပါသည် ဘုရား လုပ်နေရင်… ရေစက်ချမှ သာဓုခေါ်ပါ…။
ငါတို့ ကို ပွောရငျ ငါတို့ လုပျပေးမှာပေါ့… ဆိုတာမြိုး ပွောခဲ့ရငျ…. အဲ့အသံ တှေ စထှကျလာတုနျးက… ဘာလို့ နားထဲ မဝငျသလဲဆိုတာ.. အသံလာရာ…လမျးကွောငျးကို ပွနျကွညျ့ဖို့ လိုပါလိမျ့မယျ…ထငျပါတယျ…. အားလုံး ပူးပေါငျး လုပျမှ…. အဆငျပွမေယျ့အခြိနျပါ…. Fever Clinic က ဆရာဝနျတှကေို… ပွဈတငျပွောဆိုတာ…. မဖွဈသငျ့ပါ… လကျရှိမှာ….အရှအေ့ရမျးရောကျနတေဲ့…. ကာကငျးတှပေါ…. သူတို့ဆီက အသံတှေ ကွောငျ့သာ… အပျေါက သိပွီး.. Guide Line တှေ…ပွငျလာတာပါ…။လေးစား အပျပါသော….. အမတျမငျးမြား ခမြာ…. Fever Clinic မှာ အနံ့ ပြောကျလူနာတှေ ပွနျလှတျနရေတယျ ဆိုတာ တဈကယျပါ…. အမတျမငျး တို့ မသိကွသေးလို့ပါ…. ။
ဒီတိုငျး လူနာကို သခြောရှငျးပွ ပွီး… ပွနျလှတျနတေဲ့…..ဖြားနာကုဆေးခနျး တှေ ရှိပါတယျ…. အနံ့ပြောကျရငျ အိမျပွနျ……..အိမျမှာနေ… Mask တပျထား… နောကျရကျ လူနာတငျကား နဲ့ လာချေါ… Swab ယူပေး… အဲ့လို လုပျနရေတာ ကွာပါပွီ ခမြာ….. ဘယျတုနျးကတညျး ကလဲ ဆိုရငျ….. ဆေးရုံမှာ….လူနာတှေ ပွညျ့ကုနျကတညျးက ပါ… Q centre တှေ…. နဲ့ ဆေးရုံ အသဈတှေ မဖှငျ့ခငျ စပျကွားမှာပါ… အငျး စိနျမှာ Swab ယူ ဖို့…..ရကျခြိနျးတှေ ဘယျရကျအထိ ပွညျ့ကုနျပွီဆိုတဲ့ နရေ့ကျတှကေို သတိရမယျ ထငျပါတယျ…. အဲ့အခြိနျက စပါတယျ ….အဲ့ နညျးဗြူဟာကို အပျေါက မကွိုကျပါဘူး…. ဒါပမေယျ့ Q centre တှေ ဆေးရုံ တှေ မှာ… နရော မဆနျ့တဲ့အတှကျ…။
​မွေ ပွငျ က အဆငျပွသေလို လုပျနကွေတာကို… မသိခငျြယောငျဆောငျပေးထားကွပါတယျ…. .အဲ့နောကျပိုငျး Q centre တှေ Guideline တှေ….ပွငျပါတယျ. ဆေးရုံ တှေ ခြဲ့ပါတယျ… နညျးနညျး ပွလေညျ သှားပါတယျ…. ဒါပမေယျ့ အနံ့ပြောကျလူနာတှေ တဈအားမြားလာပွီး.. NHL ရဲ့ စဈနှုနျးကို ကြျောလှနျလာတဲ့အခါ.. နောကျတဈခါ ဒီအတိုငျးပွနျလညျပါတယျ..အဲ့အထိ အမတျမငျးမြား…သိပျမသိကွသေးပါ… အုပျခြုပျရေးမှာ အပျေါပိုငျး လောကျကသာ… သိပါတယျ…. အခု ပွောတဲ့ အောကျက Case လောကျသာ… အမတျမငျးတို့ Level နဲ့ သိကွမှာပါ…. အမတျမငျးမြား သိအောငျ… ပွသနာ အနညျးငယျ ရှိတဲ့ ကိစ်စလေးတှေ… ပွောပွပါမယျ…။
စစခွငျး ဖွဈတာ….မွောကျဥက်ကလာပါ…. မွောကျဥက်ကလာ Fever Clinicက အနံ့ပြောကျလူနာ ပွနျလှတျတာကို…. အုပျခြုပျရေးပိုငျးက သိသှားပါတယျ… သိတော့ Complaint တကျပါတယျ… အဲ့ ခြိနျက ရိုးမ ဆေးရုံ စRun ဖို့ လုပျနခြေိနျထငျပါတယျ…… ဖွဈစဥျမှာ …အဆငျ့ဆငျ့ ခေါငျးမခံ ပဲ… မရှငျးပွပဲ… ပွနျလှတျတဲ့ ဆရာဝနျ ခေါငျးခံ လိုကျရပါတယျ..။ရလဒျက မွောကျဥက်ကလာ Fever clinic ပိတျပါတယျ.. အဲ့တာရဲ့ အကြိုးဆကျက… မွောကျဥက်ကလာ ဆေးရုံ ကို ဖြားနာကု လူနာတှေ.. အမြားကွီး တိုကျရိုကျ ဝငျပါတယျ… အရှကေ့ ကာထားတဲ့ Fever Clinic တံတိုငျးမရှိလို့ပါ… အဲ့လို ပွနျလှတျ နရေပါတယျ ဆိုတာကို…. အလယျ Level က သိတာ… ။
ဆေးခနျး နှဈခု မွောကျ….မှပါ…. အဲ့တော့မှ မကျြကလဲဆနျပွာ ဖွဈကုနျကွတာပါ…. အဲ့အရငျ ပွောခဲ့…ကွပါတယျ… သိပျမ လှုပျခဲ့ ကွပါ… အလုပျရှုပျနတောလဲ ပါပါလိမျ့မယျ….. ခုကွတော့မှ အသံထှကျတဲ့ ဆရာဝနျတှကေို… လိုကျ ဖိပွောနကွေတာ… သဘာဝ မကပြါ….။ အားလုံးကောငျးပါသညျ ဘုရား လုပျနရေငျ… ရစေကျခမြှ သာဓုချေါပါ…။